‘रिभेन्ज’ मा खगेन्द्र ‘खराे’काे इन्ट्री – फिल्म हेरेपछि दर्शकका आँखा रसाए ! – Anusandhan Online
मुख्य पृष्ठ /News/‘रिभेन्ज’ मा खगेन्द्र ‘खराे’काे इन्ट्री – फिल्म हेरेपछि दर्शकका आँखा रसाए !
इटहरी । शनिबार इटहरी काे इलाइट सिनेमा हलमा ७० बर्षिय शान्ता पाठक काे आखामा आशु थियाे । चलचित्र रिभेन्स हेरेपछि उनकाे आँखा भरी आँसु देखेपछि हामीले साेध्याै आमा किन आखामा आँस ? उहाकाे जवाफ थियाे नेपाली छाेरी चेलि यसरी नै बिदेशमा बिचिदै छन । साच्चै सत्य घटनाको फिल्म आज हेर्न पाए । अब चाहिँ सचेत हुन्छन कि उहाकाे जवाफ थियोे । चलचित्र रिभेन्स काे बिशेष साे पुर्वकाे इटहरीमा भएको छ । पुर्वकाे वभिन्न क्षेत्रमा छायांकन भइरहेको फिल्म आज हलमा प्रदशन भएको हाेे ।
डिएस डिजिटल सिनेमाकाे प्रस्तुतिमा बनेकाे चलचित्र माेरङकाे तरहराका विभिन्न क्षेत्रमा छायांकन भएको थियो । शंकर अधिकारी घायलकाे लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्म मा नेपाल बाट बिदेश मा बेचिएका चेलिबेटी हरुकाे कथालाइ समेटिएकाे छ ।
मेचीनगरकाे बजेट नगरको विकास सुशासन र समृद्घिमा केन्द्रित